Jowhar.com : Somali Leader News - News: Shirkada Turkish Airlines oo iska fogeysay inay hub u daabushay dalka Nigeria
April 23 2014 21:39:59
Shirkada Turkish Airlines oo iska fogeysay inay hub u daabushay dalka Nigeria
Shirkada diyaaradaha ee Turkish Airlines ayaa iska fogeysay inay saanad hub ah ay si sharci daro ugu daabushay dalka Turkiga, iyadoo arrintan ay noqotay hadal heynta ugu badan ee dalkaas.
Cod si sir ah loo duubay oo lagu faafiyay barta Youtube ayaa waxaa wada sheekeysi ay dhex mareysay la taliye ka tirsan Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Recep Tayyib Erdogan iyo Mas'uul ka tirsan Shirkada Diyaaradaha Turkish Airlines.
Labada mas'uul ayaa ka hadlayay hubka loo qaadayay Nigeria, waxaana mas'uulka shirkada ka tirsanaa uu sheegayay in hadii hubkan lagu leynayo dad Muslimiin ama kirishtaan.
Shakiga ugu weyn ayaa ah in hubkaas loo daabulay koox Islaaamiyiin ah oo ka dagaalanta Nigeria, waxaana loo maleynayaa inay tahay kooxda mayalka adag ee Boko Haram.
Bayaan ka soo baxay Shirkada Turkish Airlines ayaa lagu beeniyay codkaas lagu baahiyay bogga Youtube, sidoo kale waxa ay shirkadu cadeysay in hadii hub ay geyn laheyd dal kale ay u mari laheyd hab sharci ah.
Shirkada Turkish Airlines ayaa qeyb ka mid ah waxaa saami ku leh dowladda, halka inta kale ay ku leeyihiin shirkado ganacsi, waxayna ka mid tahay diyaaradaha ugu casrisan caalamka.
Dowladda uu hogaamiyo Mr Erdogan ayaa dhowrkii bilood ee u dambeysay wajaheysay dhaliilo iyo mucaarado, iyadoo dhowaan barta Youtube la geliyay cod la sheegay inuu ahaa Erdogan iyo wiilkiisa oo ka sheekeysanayay in la xado malaayiin doolar.
0 Comments · 1454 Reads
Jowhar.com735,529 unique visits